गोपाल किरातीले महान जनबिद्रोह गर्न पुनर्गठन गरे वाइसिएल «
गोपाल किरातीले महान जनबिद्रोह गर्न पुनर्गठन गरे वाइसिएल
प्रकाशित मिति : 13 September, 2019 2:14 pm
-राज कुमार राई
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष गोपाल किरातीले आफ्नाे पार्टीको भातृसंगठनको रुपमा रहने गरी वाइसिएल (युवा कम्युनिष्ट लिग) गठन गरेका छन् । सो भेलाबाट ९९ सय केन्द्रिय सदस्य सहित वाई सिएल पुनरगठन गरिएको छ । पूर्व जनमुक्ति सेनाको बटालियन बि.सि. प्रकाश राई गौरबको अध्यक्षतामा नेकपाले फेरि आफनो जनमुक्ति सेना वाई सिएल गठन गरिएको हो । नव गठित वाई सिएलहरुलाई नेकपा माऔबादी केन्द्रका वर्तमान अध्यक्ष गोपाल किराँतीले गोपनीयता तथा सफथ खुवाएका थिए ।
जसमा उपाध्यक्षमा प्रकाश दुमी राई, सचिवमा राज्य खम्बु, कपिल सिजापति लगायत छन् । नेता किरातीले वाईसिएलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सपथग्रहण गराएका छन् । जसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नं १ इन्चार्ज तिलक थापा मगर, महासचिव कर्णजित बुढाथोकी, सचिव राजन तिमिल्सिना, विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष आलोक रायमाझी लगायत नेताहरुको सहभागिता थियो ।
साथै किराँतीले पार्टीको नीतिनियम र सिद्धान्तको विषयमा पनि सबै कार्यताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रचण्ड सत्ताको प्रलोभनमा लोभिएर दलाल पुँजीबादी एमालेमा विलय भए पछि आफूहरु एक सच्चा कम्यूनिष्ट भएकोले फेरि पनि कुनै विचलित नभई १७ हजार सहिदको सपना साकार पार्न तथा जनताको चाहानालाई पुरा गर्ने उद्देश्यले यो महान नयाँ गौरबशाली पार्टीको पूनरजन्म गरिएको अध्यक्ष किराँतीले बताए । किराँतीले अनेक नक्कलजकल गरि पार्टीको कार्यक्रममा नेता कार्यकर्तालाई आसन ग्रहन,फूलमाला, खदा र अबिर जात्रा गर्नु वाईयात भएको बताए ।
यस्ता अनावश्यक देखासिखी गरेर नेतालाई हाईलाइट गर्ने पार्टीको नीति नभएर नयाँ ढङ्गबाट देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउने आफ्नो पार्टीको मुल एजेन्दा रहेको पनि जानकारी गराए । किराँतीले प्रचण्डको तस्बिरलाई हनुमानसँग तुलना गर्दा सबै कार्यकर्ताहरुको मुखबाट हाँसोको फोहरा उठेका थिए । खदा र फूलले सबै ढाकेको शरीरमाथी अबिरले रंगिएको अनुहार देख्खा हनुमानको शरीरसँग मेल खाएको उहाँले बताए । अरु बेलाको पार्टीको कार्यक्रम र सोमबार आयोजना गरिएको ने.क.पा. माऔबादी केन्द्रका पार्टीको कार्यक्रम आकाशपतालको फरक थियो ।
कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई अबिर, खदा, माला लगाएर असन ग्रहण गरेका थिएनन् । अध्यक्ष किराँतीले नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीको नीति नियम सिद्धान्तको बारेमा जानकारी गराउदै तीन पेन लामो आफ्नो पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उहाँको प्रतिवेदन हु–बहु सबै कार्यकताबाट समर्थन भई पारित भएको थियो ।
प्यानल प्रस्ताव र सपथ गराउदै तिकल थापा मगरले अब एक ढिक्का भएर देश र जनताको सेवा गर्ने पालो माऔबादी केन्द्रको काँधमा आएको बताए । पार्टीको नीतिनियम र सिदान्त राम्रो भएकोले साँगठनीक र व्यक्तिगत रुपले पनि पार्टीमा प्रवेश गर्नेको अब लहर लागेको केन्द्रिय सदस्य सुमन वाङदेलले जानकारी दिए । साथै छोटो समयमा आफ्नोे पार्टीले बलियो सदस्यता हाशिल गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिए ।